Woyyaaneen mosajjii PSS jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii Oromoo basaasuudhaaf dhama'aa turuun isii beekame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woyyaaneen mosajjii PSS jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii Oromoo basaasuudhaaf dhama’aa...
Woyyaaneen mosajjii PSS jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii Oromoo basaasuudhaaf dhama’aa turuun isii beekame
Ameerikaa, Jarmanii, Kanadaa fi Australiyaa keessatti kompiitarri 20 ol mosajjii basaasaa PPS jedhamuun balfameera
Mootummaan Woyyaanee mosajjii (software) PC Surveillance System (PSS) jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii biraa basaasuudhaaf dadhabaa turuun isaa beekame. Akka qorannoon Citizen Lab jedhamu (Kanaadaa) ifa godhetti Kanaadaa fi Garmanitti kompiitarri jaha jaha, Ameerikaa fi Australiyattis kompiitarri afur afur mosajjii basaasaa Woyyaaneen namootatti ergiteen balfamuun isaa beekameera. Afrikaa Kibbaatti komiitara lama kan balfame. Citizen Lab kompiitaroonni biyyoota kanniin keessatti mosajji kanaan basaasaman kan eennuu faa akka ta’e ifa godhuu irraa uf qusateera.
Bifuma wolfakkaatuun, mootummaan Woyyaanee dhabbilee mootummaa fi kubbaaniyaa Ertiraas mosaajji PSS kanaan basaasaa turuun isii hubatameera.
Mosajjiin basaasaa kuni dandeettii email fi sanadii kompiitara namaa irra jiru dubbisuu, haasawa Skype dhaggeeffachuu, suuraa fi viidiyoo ilaaluu, waan kiiboordiidhaan barreeffamu too’achuu fi wolumaa galatti humna waan kompiitara balfame irra jiru hunda hordofuu qaba.
Mosajjii kana kan hojjate kubbaaniyaa Cyberbit jedhamu kan biyya Israa’elitt argamuudha. Mosajjiin PSS jedhamu kuni yeroo dhihoo asitti maqaa isaa gara PC 360 geeddarateera.
Mosaajjiin basaasaa kuni kan nama seenu karaa ergaa email dhaan. Woyyaaneen ergaa email nama dogoggorsu keessa mosaji basaasaa PSS jedhamu haguguudhaan namatti ergiti. Akka fakkeenyaatti, ergaan email Jawaarii fi namoota biratti ergamaa ture mataduree dogoggorsaa kanniin nakka ‘viidiyoo iccitii Woyyaanee saaxilu kana ilaalaa’, ‘shira Woyyaaneen Oromoo irratti hojjattu,’ fi maa dureewaan dogoggorsa biraa heddu qaba. Egaan email yeroo heddu kan dhufu maqaa nama Oromoo beekkamaa fi dhaabbilee mormitootaa haguuggii godhachuudhaan. Akka fakkeenyaatti Woyyaaneen email [email protected] fi [email protected] jedhamutti dhimma bayudhaan mosajjii basaasaa kana ergaa turteeri. Qorannoon Citizen Lab kan ifa godhe [email protected] dhugaa ta’us Woyyaaneen butamuu (hatamuu) isaati. Inni Shigtu Geleta ammoo kan sobaati. Woyyaaneen maqaa Geleta jedhu gara Gelleta (qubee L dachaa) godhuudhaan maqaa Shigut Galataan bananii nama dogogorsaa turaniiru. Dhimma mosajjii basaasa fi virus kompiitaraan wolqabatee rakkoon guddaan geessituu (link) ergaa email waliin dhufu cuqasuu (click) godhuudha. Mosajjiin PSS komipptara kan seenu yoo namoonni geessituu email keesa jiru cuqaasuudhaan Adobe Flush ykn Plugin sobaa gadinaquuf yaalaniidha. Adobe sobaa buusan taanaan dubbiin dhumate; kan bu’e Adobe osoo hin taane mosajjii basaasaa PSS jedhamuudha. Kan booda kompiitarri butameera jedhudha. Kompitarri butame waan irratti hojjatamu hunda sekendii sekendiidhaan gara waajjira tika nageenya Woyyaaneetti (INSA) basaasa jechuudha.
Mootummana Woyyaanee kana duras mosajjii basaasaa Hacking Team’s RCS fi Gamma Group’s FinSpy jedhamuun ESAT, gaazexeessitootaa fi rogeeyyii Itoophiyaa Biyoota Dhihaa keessatti maandhefatan basaasaa turuun isii ni yaadatama.
Falli rakkoo mosajji basaasaa fi virus kompiitaraa ergaa email maddi isaa hin beekmne ykn hin mirkanoofne irraa nama dhaqqabu banuu ykn cuqaasuu irraa uf qusachudha.
Previous articleOromoonni Aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar irraa buqqa’an rakkoo cimaa keessa jiru
Next articleWoyyaaneen tooftaa jijijjiirataa umrii akka dheereffattuuf hayyamamuu hin qabu